Nin miino ku aasayay Xaafad ka tirsan Muqdisho oo la toogtay | HalQaran.com
Home Warar Cusub Nin miino ku aasayay Xaafad ka tirsan Muqdisho oo la toogtay
Nin miino ku aasayay Xaafad ka tirsan Muqdisho oo la toogtay
Muqdisho (Halqaran.com) – Ciidamada Booliska ee Gobolka Banaadir ayaa saqdii dhexe ee xalay Magaalada Muqdisho ku toogteen nin ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab xilli uu doonaayay in wadada uu ku aaso miino.
Ninkan oo ujeedkiisu ahaa in miinada uu ku aaso Waaxda Horseed, Laanteeda Nation-ka ee Degmada Warta Nabadda ayaa waxaa ka hortagay ciidamada ammaanka.
Guddoomiyaha Degmada Warta Nabadda Saynab Maxamuud Warsame (Saynab Xaabsey), ayaa sheegtay in ciidamada ay arkayn ninkaasi, isla-markaana ay u suurtagashay inay toogtaan.
Saynab Xaabsey ayaa ciidamada ammaanka ku ammaantay inay ku guuleysteen, oo ay ka hortaggeen qarax la doonaayay in shacabka lagu dhibaateeyo.
Ciidamada ammaanka ayaa maalmo ka hor Degmada Xamar Weyne ku qabtay nin dhalinyaro ahaa, oo lagu eedeeyay in bambo gacmeyd uu ku tuuray Saldhiga Booliska ee Afar Irdood.
Si kastaba, tallaabada xalay lagu toogtay ninkan Shabaabka ka tirsanaa ayaa ku soo aadaysa, xilli muddooyinkii ugu dambeysay ay Caasimadda Muqdisho ku soo badanayeen qaraxyo la dhigo hareeraha waddooyinka.
miino waddada lagu aasay
Nin Shabaab ah